नेपालमै बन्यो ‘रोबोट नर्स’ ! आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमितको स्याहार गर्दै मानवनिर्मित ‘नर्स’ - Kamana News
नेपालमै बन्यो ‘रोबोट नर्स’ ! आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमितको स्याहार गर्दै मानवनिर्मित ‘नर्स’
बुटवल । रुपन्देहीका २ जुम्ल्याहा दाजुभाइ लव र कुश पन्थी ‘लकडाउन’मा पनि निकै व्यस्त थिए । विगत २ वर्षदेखि रोबोटको खोज अनुसन्धानमा जुटेका दाजुभाइलाई विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको उपचार सहयोगी बन्नसक्ने ‘रोबोट नर्स’ बनाउने सोच आयो । दुवैले काम गर्दागर्दै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर तीब्र हुँदै गयो ।
४ फिट अग्लो रोबोटमा हाइटेक माइक्रोफोन, १२ एमपीको क्यामरा, अल्ट्रासाउन्ड स्पिकर जडान भएको छ । रोबोटमा लुकु ९लवकुश० भर्जन–७ प्रयोग गरिएको रोबोटका आविष्कारक लवकुश बताउँछन् । रोर्बटमा जडित माइक्रोफोनले मानिसको आवाज सुन्न सक्ने र आवाजलाई सफ्टवेयरको माध्यमबाट बुझेर जवाफ समेत फर्काउनसक्ने उनले बताए । रोबोट निर्माणमा ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।
रोबोटसँगै जुम्ल्याहा दाजुभाइले ‘गो कोरोना कन्ट्रोल एन्ड्रोयड एप’ तयार गरेका छन् । एपलाई शुरूमा इन्टरनेट प्रोटोकल ९आईपी० को माध्यमबाट रोबोटमा जोड्ने गरिन्छ । त्यसपछि मोबाइल एपबाट पठाएको डाटाबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यो प्रक्रियामा भने इन्टरनेटको प्रयोग हुँदैन ।
शनिवार, जेठ १० २०७७०६:०३:३८